Maninona no zava-dehibe ny fizahan-tany raha ny SKAL
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Macau » Maninona no zava-dehibe ny fizahan-tany raha ny SKAL
Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Guam • fampiasam-bola • LGBTQ • Vaovao farany Macau • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Nandritra ny Kaongresy Area Azia Skål Azia 47 any Macau notontosaina vao haingana, ny filoham-pirenena Skål Iraisam-pirenena Susanna Saari dia nizara, tamin'ny lahateny lehibe nataony, ny antony maha-zava-dehibe ny fizahantany ary indrindra ny fomba fitomboan'ny fizahan-tany ny motera izay mitarika ny fanambinana ara-toekarena izay matetika no iray amin'ireo lehibe indrindra loharanom-bola ho an'ny firenena an-dalam-pandrosoana.
Ny filoha Saari dia nanome alalana ny hamoahana ny kabariny eto:
“Faly be aho miresaka amin'ny vondrona Skålleagues mafana fo amin'ity kongresin'ny faritra Aziatika ity.
Ity no kongresy farany nataoko tamin'ny naha-filoham-pirenena ahy ary sambany nitsidika an'i Macau aho; Faly be aho fa afaka eto mba hankafy ny fandraisam-bahiny aziatika.
Mahatsiaro ho toy ny mpifindrafindra monina Skål ihany koa aho - saingy amin'ny lafiny tsara - satria ny filoham-pirenena Skål manerantany dia fotoana iray mety amin'ny androm-piainana rehetra.
Androany ny fizahan-tany no toekarena mitombo haingana indrindra eto an-tany, izay mitovy na mihoatra ny an'ny fanondranana solika aza; Vokatra sakafo na fiara. Araka ny lazain'ny UNWTO, ny fizahantany dia nanjary iray amin'ireo mpilalao lehibe indrindra amin'ny varotra iraisam-pirenena, ary miaraka amin'izay dia iray amin'ireo loharanom-bola lehibe ho an'ny firenena an-dalam-pandrosoana. Ity fitomboana ity dia mifanindran-dàlana amin'ny fitomboan'ny fahasamihafana sy ny fifaninanana eo amin'ny toerana itodiana.
Araka ny Tatitry ny fironana isan-taona an'ny UNWTO (2017), Asia sy Pasifika dia nahazo fampisehoana miavaka tamin'ny fizahan-tany iraisam-pirenena tamin'ny taona 2016, nahitana fiakarana 9% mahery tamin'ny fahatongavana, mihoatra ny salan'isa manerantany 4% sy ny fisondrotan'i Azia tamin'ny taona lasa (5 %).
Betsaka ny lafin-javatra manazava ny valim-pifidianana mafy azo avy amin'ny faritra, fa ny tanjaky ny toekarena ankapobeny any Azia sy Pasifika no ahafahana manitatra ny dia toy izany.
Azia dia nandrakitra ny fitomboana ara-toekarena haingana indrindra manerana ny faritra manerantany, izay entin'i Shina sy India, izay firenena ambony sy fahatelo lehibe indrindra ao Azia. Ny fampandrosoana ara-toekarena dia nampiroborobo ny fizahantany indrindra amin'ny alalàn'ny kilasy antonony sy manankarena izay manana fidiram-bola azo zahana mandeha.
Ny iray amin'ireo mampiavaka ny tsenan'ny fizahantany any Azia sy ny Pasifika dia ny 80% ny fitsangatsanganana ho an'ny isam-paritra, miaraka amin'ny fangatahana ivelany tarihin'i Shina, ny mpamatsy vola be indrindra eto an-tany ary ny tsena loharano mitarika hatramin'ny 2012.
Amin'ity indostrian'ny fizahantany miovaova ity dia tsy maintsy miova ny Skål International mba ho tafavoaka velona. Natomboka io fanovana io ary ny sasany amin'ireo fanovana lehibe dia ny fanaovana ny fanovana nomerika sy ny lalàna ary koa ny sokajin'ny mpikambana.
Aza adino fa miaraka amin'ny mpikambana 14,000 eo ho eo, ny Skål International dia mbola fikambanana mpizahatany lehibe indrindra manerantany. Eto amin'ny faritra Aziatika dia manana mpikambana mihoatra ny 2,400 amin'ny klioba 41 isika, 26 tafangona ao amin'ny komitim-pirenena dimy sy klioba miisa 15. Ity faritra ity angamba no maro karazana indrindra eto an-tany Skål, mahatratra 10,000 km ka hatrany Maurice any amin'ny Ranomasimbe Indianina no misy an'i Guam any amin'ny Ranomasimbe Pasifika miaraka amin'ireo klioba any amin'ny firenena 19 eo anelanelany.
Mahatsapa mafy aho fa ny Skål International dia tokony ho zava-dehibe eo an-toerana; eo amin'ny sehatra nasionaly sy manerantany ary io no tanjon'ny paikadinay hiarahan'ny CEO Daniel Otero sy ny komity mpanatanteraka.
Manana fahaiza-manao sy fahaiza-manao izay ilain'ny toeran-kaleha rehetra isika amin'ny fampiroboroboana ny fifaninanana amin'ireo mpizahatany.
Fa maninona no zava-dehibe ny fizahantany? Mino izahay fa ny valiny dia:
• Manampy amin'ny fampandrosoana ny toerana itodiana
• Miteraka asa
• Manampy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana
• Manampy amin'ny fiarovana ara-kolontsaina
• Mitondra fandriampahalemana sy filaminana
Raha tsy ampy ireo antony ireo dia inona izany?
Amin'ny maha mpilalao an-tsehatra amin'ny fizahantany sy fandraisam-bahiny, ny mpikambana tsirairay ao amin'ny Skål International dia masoivohon'ireo tanjona ireo ary manampy ny toerana alehany hahatratra ny tanjon'izy ireo.
Izany koa no antony maha-zava-dehibe an'i Skål.
Tompokolahy sy tompokolahy, Skålleagues malala: mirary Kongresy Area Aziatika mahomby eto Macau ho antsika rehetra. ”